Flake Ice Machine Manufacturers - China Flake Ice Machine Na-eweta & orylọ ọrụ
The akụkụ bụ isi nke anyị flake ice evaporator bụ ukwuu-oru oma na okpomọkụ conductivity. N'iji ọkụ na-ebu ọkụ, ọ dabara adaba maka ịme ọbụna na flake na-enweghị ntụ, nke na-adịghị adaba na agglomerate ma enwere ike weghachite ya ogologo oge.
Fresh Water Flake Ice Machine maka Ala
Snowman na-abịa na igwe mmiri ice flake ice dị iche iche na-ewepụta kwa ụbọchị site na 0,5 ruo 20 tọn. Anyị na-enyekwa igwe mmiri flake ice igwe maka mkpa gị.
Ike Ice (Kwa ụbọchị)：500kg-60,000kg
Sea Water Flake Ice Machine maka hipgbọ mmiri
Dịka ụkpụrụ nkewa si dị, igwe akpụrụ mmiri maka mmiri maka ụgbọ mmiri bụ nke emere maka akpụrụ mmiri. Site na ngwongwo na-egbochi imebi emebi, ọ na-eji mmiri mmiri mmiri kpọmkwem iji mee ice ma yabụ ezigbo ngwaọrụ maka ịkụ azụ miri emi.
Containerized Flake Ice Machine Unit nwere ike ịgba ọsọ karịa 26,000 awa na-enweghị ọdịda ma mepụta ice ọzọ. Ngwaahịa anyị na-eji ihe eji emepụta modular, na-enwe ike ịwụnye n'ime akpa. Anyị Conneerized Flake Ice Machine Unit ọtụtụ-eji ihe jụrụ, dyestuff, aquatic ngwaahịa nhazi, Erimeri ichebe na ndị ọzọ na ubi.